Kuyini Ukuqapha Komphakathi Kwezenhlalo? Konke Okufanele Ukwazi! | Martech Zone
Mhlawumbe kufanele siqale kungani. Kwesinye isikhathi sixoxa ngokuqapha imithombo yezokuxhumana namakhasimende, futhi bathi abekho ezinkundleni zokuxhumana ngakho-ke abakhathazeki ngakho. Kulungile… lokho kuyishwa ngoba noma umkhiqizo wakho ungabambi iqhaza ezingxoxweni zenhlalo, akusho ukuthi amakhasimende akho kanye nalabo abazoba ngamakhasimende akho ababambiqhaza.
Kungani Kufanele Uqaphe Imidiya Yezokuxhumana
An casula ikhasimende uxoxa ngokukhungatheka kwabo ku-intanethi. I-ejensi yethu ibe nokuzibandakanya okunzima ezinyangeni ezimbalwa ezedlule futhi saqasha izinsizakusebenza ezengeziwe ukuxazulula isimo ngezindleko zethu. Saze saqinisekisa neklayenti ukuthi banelisekile ngemiphumela… kodwa-ke sabathola bexoxa nathi ku-inthanethi. Sabiza ngokushesha, salungisa isimo, futhi basusa ingxoxo. Ukube besingalaleli, besingeke sikwazi ukuqinisekisa ukuthi banelisekile futhi idumela lethu ligcinwe ngokucophelela.
A abazoba amakhasimende lokho kulungele imikhiqizo nezinsizakalo zenkampani yakho kwezinye izinkundla zomphakathi ezicela usizo nezincomo zomthengisi. Njengoba ungekho engxoxweni, omunye umuntu esincintisana naye uyangena, abasize, futhi avuselele ukuthola inkontileka.
A ikhasimende elijabulisayo ikhuluma ngawe online. Ukubuyekezwa nobufakazi kunzima ukukuthola, ngakho-ke uma othile ekhuluma kahle ngawe - akudingeki nje ukuthi ukuzwe kufanele futhi ukwenqabe. Ubufakazi obuvela eceleni buyindlela ephumelela kakhulu yokuthola ukwethenjwa kwamakhasimende okulindelekile.
Lokhu i-infographic evela ku-Salesforce naku-Unbounce uhamba ngokusebenzisa amatemu kanye nezisekelo zokuqapha ezokuxhum. Kususelwa kumatemu - njengomehluko phakathi kokulalela, ukuqapha, ukuphathwa, analytics, nobuhlakani - kumasu wangempela womkhiqizo wakho wokuzibandakanya emithonjeni yezokuxhumana ngempumelelo.
Kuyini Social Media Monitoring
Tags: salesforceanalytics media socialukuhlakanipha kwezokuxhumana nabantuzokuxhumana ukulalelaukuphathwa kwezokuxhumana nabantuukuqapha ezokuxhumunbouncekuyinikuyini ukumaketha ezinkundleni zokuxhumana